(Credit- ငရဲ သား )
အင်းစိန် သံဃာ့အစည်းအဝေး အပြီးမှာ မျိုးစောင့်ဥပဒေ ကိစ္စ ဆွေးနွေးကြအပြီးမှာ ..
လက်ရှိ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းအတွက် ..ထူးခြားတာတွေ ... တော်တော်များများ ရှိလာပါတယ်.။
(၁) ဒီမို အုပ်စုထဲမှာ လစ်ဘရယ်နဲ့ အမျိုးသားရေးဝါဒီ ........ ကွဲလာပါတယ်..။.
(၂) အစိုးရဌာနဆိုင်ရာထဲမှာ လစ်ဘရယ်နဲ့ အမျိုးသားရေးဝါဒီ ........ကွဲလာပါတယ်..။.
(၃) ကျောင်းသားလူငယ်များထဲမှာ လစ်ဘရယ်နဲ့ အမျိုးသားရေးဝါဒီ ........ ကွဲလာပါတယ်..။.
(၅) နိုင်ငံရေးပါတီများထဲမှာ လစ်ဘရယ်နဲ့ အမျိုးသားရေးဝါဒီ ........ ကွဲလာပါတယ်..။.
(၆) ပါတီဝင်အချင်းချင်းထဲမှာ လစ်ဘရယ်နဲ့ အမျိုးသားရေးဝါဒီ ........ ကွဲလာပါတယ်..။.
(၇) မိသားစု ဆွေးမျိုး ညီအစ်ကို မောင်နှမ ကြားထဲမှာ လစ်ဘရယ်နဲ့ အမျိုးသားရေးဝါဒီ....ကွဲလာပါတယ်..။.
(၈) ပြင်ပ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၊ သူငယ်ချင်းများ၊ Online Social Networks များထဲက
သူငယ်ချင်းများထဲမှာ လစ်ဘရယ်နဲ့ အမျိုးသားရေးဝါဒီ ........ ကွဲလာပါတယ်..။.
(၉) အမျိုးသမီးထုကြားထဲမှာ လစ်ဘရယ်နဲ့ အမျိုးသားရေးဝါဒီ ........ ကွဲလာပါတယ်..။.
(၁၀) သံဃာ့ အဖွဲ့အစည်းထဲမှာ လစ်ဘရယ်နဲ့ အမျိုးသားရေးဝါဒီ ........ကွဲလာပါတယ်..။.
(၁၀) လွှတ်တော်အမတ်များထဲမှာ လစ်ဘရယ်နဲ့ အမျိုးသားရေးဝါဒီ ...... ကွဲလာပါတယ်..။.
(၁) ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ လေ့လာမိတယ်.။ အလုပ်သမားလူတန်းစား လယ်သမားလူတန်းစား အခြေခံလူတန်းစား အများကြီး အများကြီးကြားထဲမှာ ကွဲနေကြတာတွေ ဆက်မရေးချင်တော့ဘူး ...။
မကွဲပဲနဲ့ ...... စုစုစည်းစည်းနဲ့ ဘာသံမှ မထွက်တာ institution တစ်ခုပဲ ရှိပါတယ်....။
ဒိုင်တော့ စားတော့မယ်နဲ့ တူဒယ်....။
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 4:15 PM Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook